Vaovao - Ala voankazo
Efa nilalao lalao simulation lavanty ray aman-dreny ve ianao?
Araka ny fantatsika rehetra, ny lalao lavanty dia miseho amin'ny fotoana lalao multiplayer amin'ny fiaraha-mientana ara-tsosialy, ny ankamaroan'ny karatra madio, ary ny toetran'ny lalao dia ambany noho ny toetra sosialy.
Ary rehefa mifankahita ny lalaon'ny ray aman-dreny sy ny lalao lavanty, inona no karazana fanehoan-kevitra simika azo amboarina?
Alefaso amin'ny fomba ofisialy
Ny fomba faran'izay mahafatifaty, biby kely mahafatifaty ary kojakoja mahafinaritra maro dia mahatonga ity lalao ity ho tena manintona.
Ny hetsika takiana amin'ny mpilalao amin'ny lalao dia tena tsotra.
Ny mpilalao ihany no mila manokatra ny karatra voankazo ho toy ny mpanao lavanty indray, ary manokatra ny lavanty araka ny fomba lavanty amin'ny karatra.
Misy fomba telo hanaovana lavanty amin'ny lalao: vidiny tokana, ampahibemaso ary tsiambaratelo.
Ny mpanao lavanty amin'ity lavanty ity no mametraka vidiny, ary ireo mpanao lavanty hafa no misafidy raha hividy izany araka ny vidiny.
Raha tsy te hividy izany ny mpanao lavanty voalohany dia hafindra any amin'ny manaraka.Raha tsy misy mividy dia ny mpanao lavanty no mila mividy azy.
Araka ny soso-kevitry ny anarana, ny olon-drehetra afa-tsy ny mpanao lavanty dia afaka manao lavanty tolo-bidy, ary ny mpividy ambony indrindra dia afaka mahazo ny varotra.
Ny zava-dehibe dia ny hoe, ny fifanakalozam-bahoaka dia an'ny mpanao lavanty.
Amin'ny fomba lavanty tsy miankina, ny olon-drehetra, anisan'izany ny mpanao lavanty, dia afaka mandray anjara amin'ny lavanty.
Ny olona rehetra dia mametraka an-tsokosoko ny vola madinika izay tiany homena ao anaty kitapo flannel, ary rehefa vonona ny mpilalao hafa, dia hambara miaraka izany, ary ny mpividy ambony indrindra dia afaka mahazo ny varotra.
Ny tabilao dia apetraka hanisa ny vidiny farany sy ny laharan'ny voankazo tsirairay.
Ankoatra ny lavanty ampahibemaso, mila aseho eo amin'ny solaitrabe ny valin'ny lavanty rehetra.Ny voankazo tsirairay dia manana marika naoty manokana, ary ny vidin'ny lavanty dia ny isan'ny sela mihetsika.
Aorian'ny lalao, mifototra amin'ny laharana eo amin'ny solaitrabe, dia tapa-kevitra ny laharan'ny voankazo.
Ny filaharan'ny filaharana no mamaritra ny isa farany amin'ity voankazo ity.Ny voankazo ambony indrindra dia mitentina 9 isa, raha ny ambany indrindra dia 1 ihany.
Ny anjara asan'ny karatra asa
Ny lalao koa dia mametraka ny karatra asa.
Misy isa telo ho an'ny karatra asa, ary misy karatra 32.
Amin'ny lalao dia mila sokajiana sy atrehana izy ireo.Avereno ho asa ho an'ny daholobe ny voalohany amin'ny sokajy tsirairay.Rehefa vita ny asa tsirairay dia mila misokatra ny manaraka.
Tsara ny manamarika fa raha 6 ny fitambaran'ny karatra asa vita dia vita ny lalao.
Noho izany, tsy maintsy haingana maso sy kinga tanana, ary mitady fomba hamitana haingana ny asa mba hisambotra ny asa isa.
Fepetra faran'ny lalao
Misy fepetra roa hifaranan'ny lalao.
Ankoatra ny famitana karatra asa 6 dia hifarana ihany koa ny lalao rehefa vita lavanty ny karatra voankazo rehetra.
Rehefa tapitra ny lalao dia ny dingan'ny fandriampahalemana.
Ao amin'ny dingan'ny fametrahana, ny mpilalao izay mahazo betsaka indrindra amin'ny karazana kara-boankazo tokana dia afaka mahazo ny isa ankasitrahan'ireo biby kely mifanandrify aminy.
Ny isa totalin'ny mpilalao = Naoty voankazo + naotin'ny asa + Naotin'ny Animal Favor, ny mpilalao manana isa ambony indrindra no mahazo ny fandresena farany!
Ny traikefa simulation multi-auction mahafinaritra, iraka fanangonana singa manankarena sy mazava, rohy fifampiresahana fifampiraharahana falifaly nefa mifaninana, endrika fanampin-javatra tsy manam-paharoa sy mahafatifaty, miampy ny lalao tsotra, hita ao amin'ity Forest Forest ity!
Ity lalao ity dia mampiditra ny fitantanam-bola, ny kajy matematika, ny hazakazaka fanangonana isa, ny fifampiraharahana ara-barotra, ny fanangonana singa sy ny sisa mba ahafahan'ny mpilalao miaina fahafinaretana be indray mandeha!
Izy io koa dia afaka mamboly ny fahaizana mandinika, ny fahaiza-manao kajy, ny fahaiza-misaina mahaleo tena, ny fahaiza-miresaka, sns amin'ny lalao, mianatra fahalalana mahaliana, mahatonga ny fotoana fialan-tsasatra ho feno dikany amin'ny lalao!
Fotoana fandefasana: Mar-29-2022